ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ - ၁၁
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ျြ. Ms. Christine Schraner Burgener အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်(ကြည်း)နှင့် အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ အကြီးတန်းနိုင်ငံရေးအရာရှိ Mr. Jung Hwan Lee နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဖြင့် အမှန်တရားများကို ဖော်ထုတ်ပြီး နိုင်ငံတကာက သိရှိအောင် ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ အရွယ်မရောက်သူကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂနှင့်နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ဒေသပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊သြဂုတ်လဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ခြမ်း၌ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ဘင်္ဂါလီများအပေါ် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့် အနာဂတ်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မူဝါဒ(၆)ရပ်နှင့်အညီ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေချိန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လိုအင်ဆန္ဒများကို လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး တောင်းဆို၍ မရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ များအား အပြန်အလှန်အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြပြီး ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေ များနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်မှန်များကို နိုင်ငံတကာကို သိရှိအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည့်အခြေအနေများအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ကုလသမဂ်ဂအထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ - ၁၁
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ ကုလသမဂ်ဂအထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျြွ. Ms. Christine Schraner Burgener အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီး ခြုပျ(ကွညျး)နှငျ့ အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ကုလသမဂ်ဂအထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူး ကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ အကွီးတနျးနိုငျငံရေးအရာရှိ Mr. Jung Hwan Lee နှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးရေး ကျောမရှငျအဖှဲ့ဖွငျ့ အမှနျတရားမြားကို ဖျောထုတျပွီး နိုငျငံတကာက သိရှိအောငျ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ အရှယျမရောကျသူကလေးသူငယျမြား စဈမှုထမျးဆောငျခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ကုလသမဂ်ဂနှငျ့နောကျဆုံးဆကျသှယျဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျဒသေပွနျလညျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျ၍ ရခိုငျပွညျနယျတညျငွိမျ အေးခမျြးမှုနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးမှုတိုးတကျရေးအကောငျအထညျဖျောရေး ဗဟိုကျောမတီ ဖှဲ့စညျး၍ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ၂၀၁၇ခုနှဈ၊သွဂုတျလဖွဈစဉျနောကျပိုငျး ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျခွမျး၌ လုံခွုံရေးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ဘင်ျဂါလီမြားအပျေါ နိုငျငံသား စိစဈရေးဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ၏ နောကျဆုံး အခွအေနနှေငျ့ အနာဂတျအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး မူဝါဒ(၆)ရပျနှငျ့အညီ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိအောငျ နိုငျငံတျောအစိုးရ၊ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီစနဈကငျြ့သုံးနခြေိနျ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ လိုအငျဆန်ဒမြားကို လကျနကျစှဲကိုငျပွီး တောငျးဆို၍ မရရှိနိုငျမှုအခွအေနေ မြားအား အပွနျအလှနျအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးကွပွီး ကုလသမဂ်ဂအထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျက မွနျမာနိုငျငံ၏ အခွအေနေ မြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ဖွဈစဉျဖွဈရပျမှနျမြားကို နိုငျငံတကာကို သိရှိအောငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ သှားမညျ့အခွအေနမြေားအား ပွနျလညျဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျ Ms. Christine Schraner Burgener တို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။